Jesse Plemons dia hisolo toerana an'i DiCaprio ao amin'ny Killers of the Flower Moon. | Avy amin'ny mac aho
Jesse Plemons dia hisolo toerana an'i DiCaprio ao amin'ny Killers of the Flower Moon.
Na dia mbola eo am-pamokarana aza izy io ary tsy manana daty famoahana akory, tsy misy isalasalana fa ny Killers of the Flower Moon angamba no sarimihetsika izay nahatonga ny fientanam-po indrindra hatramin'ny nahafantarana fa i Martin Scorsese no ho azy talen-tsekoly ary DiCaprio no mpandray anjara fototra. Na izany aza, nisy fiovana lehibe teo amin'ny mpilalao. I Jesse Plemons no tena mpilalao fototra.
Tamin'ny taon-dasa, nipoaka ny vaovao fa ny script ho an'ny Killers of the Flower Moon dia nandalo famerenana ary nanapa-kevitra ny hivarotra ilay tetikasa amin'i Apple ho an'ny Apple TV +. Ny hevitra tany am-boalohany dia ny hameloman'i Leonardo DiCaprio ny fiainana ilay maherifon'ilay sarimihetsika. Na izany aza, nanosika ny mpilalao hihetsika ny mpilalao avy amin'i Tom White ka hatrany amin'ny an'i Ernest Buckhart, zanak'anabavin'ilay mpanohitra ny tantara, izay hataon'i Robert De Niro.
Fantatra ankehitriny fa i Jesse Plemons, fanta-daza amin'ny anjara asany amin'ny "Zoma alina jiro" sy "Breaking Bad" dia hanatevin-daharana ny mpilalao. Hanao tatitra amin'i Martin Scorsese izy. Niara-niasa tamin'io Netflix io ​​"The Irishman." Ao amin'ny Killers of the Flower Moon, Plemons no milalao an'i Tom White. Izy no ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny FBI manadihady andianà famonoana olona ao amin'ny Osage Nation tamin'ny taona 1920 tany Oklahoma. Antenaina hanomboka amin'ny Mey ny fanaovana ny sary ary hisongadina ihany koa mpilalao sarimihetsika Lily Gladstone izay handray ny asan'ny vadin'i Burkhart, Mollie.
Hihaino tsara izahay raha misy vaovao hafa ao amin'ity sarimihetsika ity. Izay alohan'ny hanombohana ny fandefasana sary dia efa manome zavatra betsaka horesahina izy. Azo antoka fa tena sarobidy tokoa izy io ho an'ny Apple TV +. Zavatra ilainao sy fahitanao zavatra maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Jesse Plemons dia hisolo toerana an'i DiCaprio ao amin'ny Killers of the Flower Moon.
Apple Update momba ny fiarovana ny macOS 11 Big Sur, Mac miaraka amin'ny Apple Silicon, ary maro hafa
Ny lalao Drift tanteraka, maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny Epic Games Store